Museeveenii Yugaandaa : Afriikaanotatti waan sirri waan himeefan Tiraampiin jaaladha - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Obbo Museveeniin Tiraamp ifatti dubbachuu isaanii nan dinqisiifadha jedhan
Pireezidantiin Yugaandaa Yuweerii Museveenii haasaa godhaniin ''jaalala'' pireezidaanti Tiraampiif qaban ibsaniiru.
Jalqaba ji'a kanaa irratti walgahii dhimma godaantummaa godhame irratti Obbo Tiraampi biyyoota Afriikaa ''boollaa kosii'' jechuun yakkuun arabsanii turan.
Obbo Tiraamp kana jechuu isaanii kan haalan ta'uyyuu seenetaroonni Ameerikaa walgahii kanarra turan garuu jedhaniiru jedhu.
Gamtaan Afrikaas qeeqa ''ifatti sanyummaa'' muli'su gochuu isaaniitiif dhiifama gaafachuu akka qaban waamicha dhiheessee ture.
''Ameerikaan pireezidaantoota gaarii argatte keessaa kun isa caaluudha,'' jedhanii namoota kofalchiisuun baniinsa Gumii Seera Baaftota Afrikaa ykn East African Legislative Assembly (EALA) magaalaa gudditti Yugaandaa, Kaampaalaa irratti dubbataniiru Obbo Museveeniin.
''Afrikaanotatti ifatti waan himeef,Tiraampiin nan jaalladha. Afrikaanoonni dadhaboodha, rakkoo isaanii ofiin furachuu qabu.''
Qeeqni Obbo Museveenii kun geggeesitoonni baay'een haasaa Obbo Tiraamp balaaleffachuun qeeqa dhiheessaniin kan wal faallessuudha.
Pireezidantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon Dilbata darbe BBC'tti akka himanitti, anis balaleffannaa Afikaa kana nan deggera jedhaniiru.
Wiixata irra, namoonni biyya biroo Obbo Tiraamp arrabsan Heeyitiinis, jecha pireezidantii kana mormuun mormii dhageesisaniiru.
Obbo Museveeniin pirzeedantii Ameerikaa irra goruun kan haasa'an Yugaandaatti kan argamu ambaasadarri Ameerikaa Obbo Tiraampiin qeeqanii sa'aatii tokko booda ture.
Debooraa Maalaak ''Dhugumatti kan baay'ee nama jeequuf kan nama aarsuudha,'' jechuun dubbatanii turan.
Obbo Tiraamp jecha biyyoota ''boolla kosii'' jedhu kana kan fayyadaman wayita maaliif Ameerikaan godaantoota Heeyitii fi biyyoota Afrikaa irraa fudhachuuf dirqamti jedhanii yeroo gafatanitti ture jedhama.
Bara 2017 keessa, Obbo Tiraampi Afgaanistaan bakka teessuma shororkeessitootaati; namoonni Heeyitii hundii ''Aids qabu'', akkasumas namoonni Naayijeeriyaa al tokko Ameerikaan akka galan hayyamamnaan ''gara biyya isaanitti deebi'u hinfedhan'' jechuun dubbatanii turan jedhamanii yakkamu.
Teessoo mootummaa Ameerikaa kan ta'e Waayit Haawus garuu Obbo Traamp kana hin jenne jechuun haaleera.
18 Guraandhala 2016